Ndị na-emepụta China Spray Polyurea Elastomer (SPUA) na ndị na-ebubata ya |Dehua
The spray polyurea elastomer (SPUA) bụ ihe na-ewu gburugburu ebe obibi technology izute ụwa gburugburu ebe obibi chọrọ.It na ngwa ngwa ngwakọta na abụọ ụdị mmiri mmiri, A na B, n'okpuru elu nrụgide site pụrụ iche spraying ngwá iji nweta ngwa ngwa na-agwọ ịkpụzi.
100% ọdịnaya siri ike, enyi na gburugburu ebe obibi na enweghị ihe mgbaze na-agbanwe agbanwe.
Inogide na-adịgide adịgide corrosion eguzogide, mma karịa FRP, 3PE na epoxy wdg.
Ọmarịcha ọrụ mgbochi mmiri, dị mma karịa ihe mkpuchi.
Ịrụ ọrụ dị elu, ngwa ngwa ịgbasa nwere ike ịga n'ihu na-efesa ihe karịrị 1000 square mita kwa ụbọchị.
Nguzogide iyi mara mma na ọkwa otu n'ime ihe rọba na-eyi kacha mma.
DH101 , aliphatic usoro na-agbanwe SPUA nwere magburu onwe agba njigide , ọ gaghị agbanwe agba mgbe ekpughe na anyanwụ ruo ogologo oge , kpamkpam dị iche iche si aromatic SPUA .Ọ na-tumadi eji na-echebe elu nke aromatic SPUA waterproof ma ọ bụ n'elu nke. ngwaahịa agba agba .
DH102, aliphatic usoro isiike SPUA nwere magburu onwe agba njigide, ọ gaghị agbanwe agba mgbe ekpughe na anyanwụ ruo ogologo oge, kpamkpam differnet si aromatic SPUA, Ọ na-tumadi-eji na-echebe elu nke aromatic SPUA anticorrosion , n'elu nke ngwaahịa agba ọkụ, ma ọ bụ ihe mgbochi corrosion nke ngwaahịa ọla nke na-efesa SPUA aromatic.
Nke gara aga: ngwa ngwa ịgbasa polyurea n'ala ihe